Izindaba - Kusungulwe ukubambisana kwesibili okunobungane namakhasimende aseHong Kong
NgoMeyi 2021, amakhasimende aseHong Kong a-ode imikhiqizo yokubulala amagciwane enkampanini iyale iqoqwana le magciwane ama-sanitary wet wipesevela enkampanini. Ngenxa yokubambisana kwangaphambilini, kulokhu i-oda lokusulwa kwe-sanitary wet wipes lihambe kahle. Ngesikhathi sokubambisana namakhasimende aseHong Kong, besinamaviki ambalwa wokuxhumana, kufaka phakathi ukuxhumana okuningiliziwe ezicini ezahlukahlukene ezinjengokucaciswa komkhiqizo, izinto zokusetshenziswa, izikhwama zokupakisha, ukwakheka kwezithombe, njll, futhi zombili izinhlangothi zingaphendula ngesikhathi sokuphendula ngakunye futhi exchange, ngakho-ke Impahla ingaphothulwa ngokushesha, kusheshiswe ngempumelelo ukusebenza ngokubambisana phakathi kwamaqembu womabili. Ngemuva kokuxhumana nokuqinisekisa, siqale ngeposi ibhokisi eli-1 lamasampula ekhasimende, sacela ikhasimende ukuthi lenze umbiko wokuhlola nokuhlola, futhi lathumela ekhasimende iziqu zethu zokukhiqiza nokusebenza kwazo nezinye iziqu ezihlobene nazo, ezaqashelwa ngokushesha yikhasimende , futhi wa-oda ngokushesha amabhokisi angama-20 000, ngezitolimende Umkhumbi. Ngemuva kokufika kwemikhiqizo, amakhasimende anikeze ukusekelwa okuqinile nokuqashelwa kwikhwalithi nekhwalithi yokukhiqiza yemikhiqizo yenkampani.
Ngaphambi kokukhiqizwa komkhiqizo ngamunye, abasebenzi abakhiqiza i-workshop bazokwenza isivivinyo ngemishini nemishini. Ukuhlolwa ngakunye kuthatha imizuzu engu-5-10. Ngemuva kokuthi ukuhlolwa komshini kuqediwe, bazoya endaweni yokuhlanza ukuze bakhiqize. Ngemuva kokuthi umkhiqizo ukhiqizwe, kuzoba khona umhloli okwesibili. Bheka ukuvimbela ukuvuza kokupakisha noma izinkinga zekhwalithi yomkhiqizo. Kuphela ngemuva kokuthi kuqedwe ukuhlolwa kwesibili lapho kungapakishwa khona futhi kuthunyelwe kumakhasimende. Uketshezi olusetshenziswa ekwenzeni ama-wet wipe luyacwaningwa futhi lwenziwa ngabasebenzi abaqeqeshiwe nabasebenza ngobuchwepheshe. Ihlolwe ngokuqinile kwezobuchwepheshe futhi inombiko wokuhlola ophelele, ukuze uqiniseke ngokwengeziwe ngemikhiqizo yethu.
Isisekelo sokubambisana phakathi kweYantai Haicheng Sanitary Products Co, Ltd. namakhasimende ayo yisiqinisekiso sekhwalithi, isiqiniseko sejubane lokukhiqiza, kanye nokuqinisekiswa kwentengo. Wonke amakhasimende lapha azothola imikhiqizo esezingeni eliphezulu nezinsizakalo ezihamba phambili, futhi angakhiqiza imikhiqizo eyanelisa kakhulu kumakhasimende. Akukho mehluko wamanani wesibili womuntu ophakathi, ukuze wonke amakhasimende abone ukuthi inani lemali liyazuzisa. inani. Ukubambisana okuhle nakho akunakwehlukaniswa kokubambisana kanye nemizamo yazo zombili izinhlangothi. Ngokusebenza ngokubambisana kuphela lapho singathola khona isimo sokuwina.